Kurmaana jalqabaatti Oomishoota toonii kuma 131 gatii Biirri biiliyoona 7 qaban wal bichisiisusaa beeksiise – Fana Broadcasting Corporate
Kurmaana jalqabaatti Oomishoota toonii kuma 131 gatii Biirri biiliyoona 7 qaban wal bichisiisusaa beeksiise
Finfinnee, Onkololeessa 21, 2012 (FBC) – Gabaan Oomisha Ityoophiyaa kurmaana jalqabaatti oomishoota toonii 131 gatii Biirri biiliyoona 7 qaban wal bichisiisuu isaa beeksiiseera.
Ibsa Gabaan Oomisha Ityoophiyaa Faanaa Broodkaastiing Koorpeeretiif ergeen kurmaana jalqabaa waggaatti buna toonii kuma 79 fi 202 Birrii biiliyoona 5.9 yoo wal bichisiisu, atara toonii kuma 25 fi 882 Birrii miiliyoona dhibba 3 fi miliyoona 96 wal bichisisuu isaa beeksisera.
Akkasumas, saliixii toonii kuma 14 fi 926 Birrii miiliyoona dhibba 8 fi miiliyoona 35 yoo wal bichisisuu, boloqqee adii toonii kuma 4 fi 9 Birrii miiliyoona 83 wal bichisiisera.
Raawwiin karoora kanaa %140; gatiidhan ammoo %145 kan milkaa’e yoo ta’u, kan bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu %86 akkasumas, gatiidhan %70 dabalata agaarsiisera.
Kurmaana jalqabaan boloqqee diimaa fi maashoo magariisaa wal biichisisuun kan eegalame yoo ta’u, maashoo magariisa kuntaala kuma 7 fi 65 Birrii miiliiyoona dhibba 2 fi miiliiyoona 16.7 wal bichiisisera.
Daldala bunaa irra galiin Doolaarri Ameerikaa miiliyoonni dhibba 2 ol argamuun ibsame
Kookeeyiniin kiiloo giraamni 5.2 to’annoo jala oole
Kurmaana jalqabaatti oomishaalee gara alaatti ergamanirraa doolaarri Ameerikaa…